Global Voices teny Malagasy » Feo avy any Zimbaboe-2 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Avrily 2018 20:02 GMT 1	 · Mpanoratra Zimpundit Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Zimbaboe, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Namoaka lahatsary mandratra fo mirakitra ireo fidarohana feno habibiana nianjady tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana sendikaly tato ho ato ny Global Voices. Hitanao eto ny lahatsoratra sy ny lahatsary. 
Lasa sehatra ho an'ny fipoahan'ny fankahalàna vehivavy voakiana be, izay niseho tao amin'ny parlemantan'i Zimbaboe tamin'ny herinandro lasa teo, ilay adihevitra manodidina ny lalàna vaovao, dia ny Volavolandalàna mikasika ny Herisetra an-Tokatrano  izany. Nisarika ny hatezeran'ny vehivavy maneran-tany i Timothy Mubhawu, mpikambana ao anatin'ny Parlemanta Zimbaboeana miteraka resabe, raha naneho ny heviny momba ilay volavolandalàna natolotra, nilaza ny tenany ho ”mpitondra tenin'Andriamanitra”,
”Mijoro eto aho, misolo tena an'Andriamanitra Tsitoha. Tsy mitovy amin'ny lehilahy ny vehivavy. Volavolandalàna mampidi-doza io ary ampahafantaro aty Zimbaboe fa efa tsy misy intsony ny zo, ny tombontsoa sy ny sarangan-dehilahy. Mijoro irery eto aho ary milaza fa tsy tokony halefa ao amin'ity Birao ity io volavolandalàna mampidi-doza io. Volavolandalàn'ny devoly izy io. Voaroba amin'ny andro antoandro ato anatin'ity Birao ity ny herintsika.”
Tsy ho mahatsiravina toy izao ity fipoahana ity raha toa ka nambaranà mpanao lalàna hafa afa-tsy i Mubhawo. Nidina an-dalambe ireo vehivavy Zimbaboeana  ny andro taorian'ilay fanambaràna malaza nataon'i Mubhawo. I Mubhawo no ahiahiana voalohany indrindra amin'ilay raharaha fanafihana mahery setra an'i Trudy Stevenson , vehivavy iray fotsy hoditra parlemantera.
Manindry ny fanajàna omena ny vehivavy ao amin'ny kolontsaina nentim-paharazana Zimbaboeana i Zimpundit , mandà ny toetsaina lany andron'i Mubhawo.
Manome lanja lehibe ny andraikitry ny vehivavy ny kolontsaina Zimbaboeana. Araka ny fomban-drazana am-bavan'ny Shona, ny fikasihan-tànana ny reniny no zavatra manafintohina indrindra mety ho vitan'ny ankizy. Ny hevitra manontolo ao ambadiky ny teny Shona hoe ”kutanda botso” na ny famadihana avo ataon'ny zanaka, dia mifototra manodidina ny fiarovana ny endriky ny reny. Tsy misy fepetra toy izany miaro ny endriky ny ray aman-dreny kanefa amafisina hatrany hatrany eo anivon'ny ankizy ity hevitra ity mandritra ny fitomboany.
Avo dia avo ilay fanajàna tsy misy fepetra ny reny izay entin'ny kolontsaintsika, tadidiko tsara mihitsy aho nahatsiaro meloka ho nanao ity famadihana avo ataon'ny zanaka ity noho ny hatezerana tsotra tamin'ny reniko. Ny ratsy indrindra dia ny vokatry ny ”kutanda botso” izay haromontana ara-tsaina, ho toy ny sazy avy amin'ireo razambe, tena mety mampatahotra be ny fitomboana anaty ankohonana Zimbaboeana.
Manana fandrakofana feno an'ireo fivoarana manodidina ilay volavolandalàna ny vondron'olompirenena Zimbaboeana, Kubatana,  izay hitanao eto .
Tanatinà vaovao hafa, namoaka fanambarana momba ny pôlitikam-bola i Gideon Gono, Governoran'ny Banky Foibe. Maneho hevitra momba ireo fepetra anatin'ilay fanambarana vaovao ny Bearded Man ,
Na voafetra aza ny fahatakarako ny sehatry ny hetra, mbola mihevitra aho fa mandrora mitsilany izao ataon-dry zareo izao. Hitantsika tsikelikely fa mametraka ireo arom-baravarana ka manakatona ny tontolo rehetra aty ivelany i Zimbaboe. Ahoana no hahafahan'ireo olona aty ivelany manome vola ny fianakaviany ao anatin'ny firenena? Koa ankehitriny dia mandidy ireo olona ivelan'ny firenena i Gono! Nefa dia Governoran'ny Banky Foibe fotsiny ihany izy! Manambara zavatra amintsika momba ny hery heverin'ireo manampahefana fa ananany izany. Ahiako ho saritsarin-kalehibeazana…
Afaka mamaky ilay fanambarana manontolo ianao eto .
Farany, miaraka amin'izao zava-mitranga rehetra eto amin'ny firenena izao, tena tsy mahagaga raha ripaka ny lalao Cricket ao Zimbaboe. 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/30/118622/
 Hitanao eto ny lahatsoratra sy ny lahatsary.: https://www.globalvoicesonline.org/2006/10/13/zimbabwe-smuggled-dvd-brings-union-protest-beatings-to-light/
 Volavolandalàna mikasika ny Herisetra an-Tokatrano: http://www.kubatana.net/docs/legisl/domviolbill_2003_draft.pdf
 Nidina an-dalambe ireo vehivavy Zimbaboeana: http://www.swradioafrica.com/news101006/women101006.htm
 fanafihana mahery setra an'i Trudy Stevenson: http://www.newzimbabwe.com/pages/senate212.14368.html
 Bearded Man: http://thebeardedman.blogspot.com/2006/10/tuesday-10th-october-2006.html
 ripaka ny lalao Cricket ao Zimbaboe.: http://iccchampionstrophy.blogspot.com/2006/10/zimbabwes-cricket-in-tatters-thrashed.html